DAAWO-Ciidankii Puntland Ku Wareejisey DFS oo mushaar la,aan ka cabanaya | Puntland
DAAWO-Ciidankii Puntland Ku Wareejisey DFS oo mushaar la,aan ka cabanaya
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxaya warar sheegaya in qaar kamid ah ciidanka Daraawiishta dowladda Puntland ee sanadkii hore lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya aysan weli helin mushahar iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen qoondada ciidanka xooga Soomaaliyeed.
Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo kumanaan katirsan ciidanka Daraawiishta dowladda Puntland bishii November ee sanadkii hore ku wareejiyey dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maalinkaa laga bilaabo ay xuquuqdoodii ciidanimo kueleyihiin dowladda Soomaaliya.
Qaar kamid ah ciidankii maalinkaasi lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya ayaa Puntlandnews.net u xaqiijiyey inaysan weli xuquuqdii ay lahaayeen ee ay balanqaaday aysan weli ka helin dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Xogo hoose oo aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in dowladda Soomaaliya ay Puntland ka codsatay in ilaa beesha caalamku ay dhaqaale soo fasaxayso ay mushaharka ciidankaasi qaar kamid ah sii bixiso, walow intiii kale aysan weli bilaabin.
wararka qaar ayaa sheegaya in go’aankii taliye ku-xigeenka ciidanka Daraawiishta Puntland uu salka ku hayo mushahar laan soo wajahday ciidankii hoos imaan jirey oo xuquuq ay ka maqantahay, inkastoo uusan warqadda iscasilaad dalbashadiisa ah uusan ku caddayn sababta.